Shiinaha 12-16 Sano Jir Gacmo Dheer Wiil T-Shirt PY-TC003 Soosaarka iyo Warshadda | Pinyang
12-16 sano jir wiil gacmo-dheer ah funaanad
1. Shaati noocee ah ayaa ku habboon wiilasha yaryar?
Carruurta, dharka midabada kala duwan ayaa aad ugu habboon iyaga - qorraxda iyo jacaylka ayaa ah qalabka caadiga ah ee carruurta. Dhammaanteen waxaan jecel nahay jawiga aan waxba galabsan iyo jacaylka carruurta, sidaa darteed carruurtu ma doortaan midabka dharka. Haddii ay "caadi" yihiin hal midab markay yaryihiin, waxay lumi doonaan riyadoodii midabada lahayd. Waxay u baahan yihiin funaanad saaxiibtinimo leh oo moodada leh, waxa ka samaysan dharkani waa dhar cudbi ah oo nadiif ah, carruurtu inta badan way dhididaa markay ciyaarayaan, markaa suufka saafiga ahi waa dharka ugu dhuuqsan dhididka, carruurtu waxay xidhaan raaxo iyo xannibaad la'aan.
2 、 Maxay yihiin faa'iidooyinka funaanadaha shaadhka leh?
T-shaati-cad waa mid fudud oo wejiyo badan leh, fudud oo la jaan qaadi kara midabbo kala duwan oo dhar ah, aad u fudud in la iftiimiyo, sidaa darteed xagaaga ayaa caan ku ah wiilasha iyo hooyooyinka yaryar. Tusaale ahaan, funaanadan cad waa mid fudud oo aan caadi ahayn, oo leh qaab liqitaan xiiso leh oo dhinaca ah, taas oo ka dhigaysa in funaanada oo dhami ay noqoto mid jilicsan, fudud oo moodada ah.
T-shaati-cadani wuxuu ku leeyahay naqshad aan caadi ahayn dhinaca. Naqshadaynta goynta 'trapezoidal' waxay ka dhigaysaa dhammaan funaanadda mid aad u kala duwan oo jinsi ah. Shaatigan fudud ee gaarka ah ayaa si fudud u muujin kara shakhsiyadda moodada carruurta xilliga xagaaga.
T-shaati cad, T-shaati cad oo qaab naqshadeysan oo xariiqa caadiga ah leh, ka dibna leh naqshad xiiso leh, funaanad noocan oo kale ah oo ka fudud shaati cad oo fudud ayaa xoogaa quruxsan oo dhadhan farshaxan leh, mood iyo quruxba leh
Isticmaalka alaabta: dharka kooxda, habeynta shakhsi ahaaneed, iwm, ayaa habeyn kara midabka, qaabka, astaanta.
S: Ma waxaad tahay wax soo saare ama shirkad ganacsi?
A: Waxaan nahay soo saaraha asalka ah iyo jumladle toos ah oo 5 sano khibrad ah.
S: Maxay yihiin wax soo saarkaaga ugu muhiimsan?
J: Waxaan nahay xirfadle soo saare dharka dharka tolida, waxyaabaha ugu waawayn ee aan soo saarnay waa funaanado, surwaal, gaagaaban, dhidid, funaanado, jaakado, s iyo dharka caruurta ee da'doodu tahay 0 ~ 10.
S: Waa maxay tayada alaabtaadu?
J: Waxaan qaadanay dhar tayo wanaagsan iyo Eco-friendly, neefsasho iyo raaxo leh, waxay ufiican tahay maqaarka caruurta .Badeecadeenu waxay ka gudubtay imtixaanka dharka SGS.
S: Maxay qiimahaagu uga hooseeyaan kuwa kale ee wax keena?
J: Fadlan ogow inaan nahay soosaaraha asalka ah iyo jumladleyda tooska ah, marka qiimaheena ayaa hooseeya.
Wax soo saarkeenu waa isku tayo oo leh qiimaha ugu hooseeya, isla qiimo tayo fiican leh.
S: Miyaan ku yeelan karaa astaanteyda alaabta?
J: Haa, waxaad ku yeelan kartaa astaan ​​astaan ​​ah. MOQ waa 50pcs / design. fadlan nala soo xiriir haddii caadadu amar bixiso.
J: Haddii aad amar ku bixiso naqshadaha hadda jira, waxay diyaar u yihiin inay rartaan .parcels ayaa loo diri doonaa muddo 7 maalmood gudahood ah ka dib bixinta rasiidka .Waxaa bixinta waqtiga ay kuxirantahay waddanka loo socdo
Haddii adeeg caadadiisu tahay, waqtiga dirista ee gaarka ahi waxay kuxirantahay walxaha iyo tirada dalabkaaga.
S: Sidee loo xaliyaa dhibaatooyinka tayada iibka kadib?
J: Dhibaatooyinka sawirro ka qaad oo noo soo dir. Waxaan kuu sameyn doonaa xal lagu qanco 24 saac gudahood ka dib markaan xaqiijino dhibaatooyinka.
Hore: Dharka Caruurta Cad Caruurta PY-YR002
Xiga: Qawaaniinta Lahabeyn karo Wiil Yar oo Gacmo Dheer ah T-Shirt PY-TC001
100% Suuf Gacmo Gaaban Wiil T-Shirt PY-TD002